यी ६ जिल्ला कोरोनामुक्त हुँदा, उपत्यकामा थपिए सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७७, शुक्रबार १७:५७
काठमाण्डौ – गएको २४ घण्टामा नेपालमा ११८ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी २४ घण्टामा ११८ संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ। शुक्रबार थपिएको सहित नेपालमा संक्रमित संख्या १६ हजार ६४९ पुगेको छ। देशभरका २५ प्रयोगशालामा चार हजार ८१० जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो।
अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणबाट दुई लाख ७५ हजार ९५१ जनाको परीक्षण गरिएको छ। अझै २३ हजार ९१० जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आठ हजार ६०३ आइसोलेसनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार, आधा संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबारसम्म आठ हजार ११ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्।
देशभर अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा भने यो चक्र उल्टो चलेको छ । मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जाँदा काठमाडौंमा भने डरलाग्दो गरी संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । आज उपत्यकाका तीन जिल्लामा थप ४२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा ४ जना, प्रदेश २ मा २० जना, बागमती प्रदेशमा ५१ जना, गण्डकी प्रदेशमा १३ जना, प्रदेश ५ मा १२ जना, कर्णाली प्रदेशमा १५ जना र सदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ जना रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकलमा गरिएको नमुना परीक्षणमा काठमाडौंका १ जना, पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ललितपुरका १३ जना र काठमाडौंका १५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै, भक्तपुरका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा काठमाडौँका थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमित हुने जिल्लामा काठाडमौंका २८, ललितपुरका १३, सुर्खेतका ११, गुल्मीका ६, इलामका २, पाँचथरका २, सिरहाका २, धनुषाका ४, महोत्तरीका ४, रसुवाका १, डोटीका १, चितवनका १, बाँकेका १, भक्तपुरका १, काभ्रेपलान्चोकका २, रामेछापका १, रौटहटका १, सिन्धुलीका १, सिन्धुपाल्चोकका १, पाल्पाका ४, रुपन्देहीका १ जना, मकवापुरका १, धादिङका १, कैलालीका १, बागलुङका २, तनहुँका ८, गोरखाका १, नवलपरासीका २, बाजुराका १, दैलेखका २, डोल्पाका १ र सल्यानका १ जना रहेका छन् ।
छ जिल्ला सङ्क्रमणमुक्त
धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्ला सङ्क्रमणमुक्ता भएको डा. गौतमले बताए। त्यस्तै छ जिल्लामा भने ५०० भन्दा बढी उपचाररत कोभिड-१९ का बिरामी रहेका छन्। ती छ जिल्लाहरू महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरा रहेका छा्। शुक्रवार सङ्क्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै वागमती प्रदेशमा ५१ जना रहेका छन्।
उपत्यकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस क्षेत्रमा विशेषतः “तीन वर्गका सङ्क्रमित” फेला परेको जनाएका छन्।उनीहरूले ती तीन वर्गका सङ्क्रमितलाई नै लक्षित गरेर अहिले थप सङ्क्रमितको पहिचान र परीक्षण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कतिपयले काठमाण्डू उपत्यकामा समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिएको भन्ने गरेको भए पनि त्यस्तो अवस्था आइनसकेको बताए। तर उनका अनुसार त्यो स्थिति आउन सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्छ।
उनले भने, “काठमाण्डूमा हामीले ट्राभल हिस्ट्री नभएकोमा सङ्क्रमण भेट्यौँ, तर समुदायमा गएर परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूमा पनि सङ्क्रमण भेटिएन।” “त्यसले गर्दा अहिले स्थानीय स्तरमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सामुदायिक तहमा प्रवेश गरिसकेको जस्तो देखिँदैन। तर एक न एक दिन त समुदायमा जान्छ नै। त्यसैले हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ।”
उनका अनुसार अहिले समुदायमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको स्थिति अध्ययन भइरहेको छ।डा. पाण्डेका अनुसार अहिले उपत्यकामा विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका, सङ्क्रमण धेरै फैलिएका जिल्लाबाट आएका र स्थानीय स्तरका गरी तीन वर्गका सङ्क्रमित भेटिएका छन्।अहिलेसम्म राजधानीमा फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये न्यून सङ्ख्याका व्यक्तिले मात्र बाहिर यात्रा नगरेको वा बाहिरबाट आएका मानिससँग संसर्ग नगरेको देखिएको छ।
उनले भने, “अहिलेसम्म नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये ९७ प्रतिशत आयातीत छन् र त्यसमा पनि पुरुष ९० प्रतिशत छन्। समुदायमा फैलिएको अवस्थामा महिलाहरू पनि उत्तिकै सङ्क्रमित हुनुपर्ने हो। त्यो देखिएको छैन।”उनले विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरूमध्ये कतिले परीक्षण नगरी पनि आएको र कति बिरामीलाई पनि विमानमा ल्याइएकाले सँगै यात्रा गर्ने कतिपय पनि सङ्क्रमित देखिएको बताए।
महाशाखाको टोलीले विभिन्न ठाउँमा रहेका ती कार्यालयमा रहेका कर्मचारी र सेवाग्राहीको नमूना सङ्कलन गरेको छ । महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रध्वज अधिकारीले एउटा कार्यालयका ६० देखि ७० जनासम्मको नमूना सङ्कलन गरिने बताए । अस्पतालमा सघन उपचार कक्षका बिरामी, अर्बुदरोग र मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहेका बिरामी तथा उनीहरुको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गरिनेछ । यस्तै बैंक, मालपोत– नापी जस्ता कार्यालयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको नमूना सङ्कलन गरिनेछ । उपत्यकामा बाहिरबाट आउने मानिस बढेपछि महाशाखाले परीक्षणको दायरा बढाएको हो । महाशाखाका वरिष्ठ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले पाँच दिनसम्म ती कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको नमूना सङ्कलन गरिसक्ने बताए । महाशाखाले बिहीबार कलङ्की, वनस्थली, चाबहिल र भक्तपुरमा ती कार्यालयमा रहेका कर्मचारीको एक हजार नमूना सङ्कलन गरेको थियो ।
यस्तै आज ललितपुरको भँैसेपाटी, काठमाडौँका नयाँ बानेश्वर र नयाँ सडक तथा भक्तपुरमा गई टोलीले नमूना सङ्कलन गर्दै छ । उहाँले दैनिक पाँच दिनसम्म एक हजारको दरले नमूना सङ्कलन गरिने बताउनुभयो । केही दिनयता लगातार उपत्यकामा कोभिड–१९ का सङ्क्रमित भेटिएपछि जोखिम बढेको छ ।